Wararka Maanta: Jimco, May 17, 2013-Urur-Siyaasadeedka MIDNIMO oo ka digey in Deegaannada Puntland ay ka billowdaan Qalalaase Siyaasadeed
Qoraal kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha ururka Dr. Saadiq Eenow, kaas oo nuqul kamid ahi uu soo gaarey Hiiraan Online, ayaa lagu sheegay in ururku uusan marna ka laaban doonin go'aankii uu horay u qaatay ee ahaa in aysan ka qayb geli doonin doorashooyinka soo socda.
Waxaa sidoo qoraalka lagu sheegay in ay suurtogal tahay in Puntland uu ka bilowdo qalalaase siyaasadeed, taas oo haddii ay dhacdo; uu mas’uuliyaddeeda ururku sheegay in ay qaadayaan mas’uuliyiinta hormuudka u ah xukuumadda xilligan ka arimisa Puntland.
Isimada, waxgaradka bulshada iyo ciidamada qalabka sida ayuu dhinaca kale ururka MIDNIMO ugu baaqay inay xil weyn iska saaraan, sidii ammaanka iyo xasiloonida ay Puntland caanka ku tahay loo sii adkeyn lahhaa.
Ugu danbeyntii waxaa bayaanka urur-siyaasadeedka MIDNIMO lagu xusay in ay tahay in sida ugu dhaqsaha badan lagu soo xulo xubno baarlamaan oo cusub; si doorashada soo socotaa ay u noqoto mid ku dhacda qaabkii hore ee ay baarlamaanku madaxweynaha u dooran jireen.
Ururka MIDNIMO wuxuu kamid ahaa kuwa ugu taageerada badan lixda urur-siyaasadeed ee ay aqoonsadeed guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland, inkasta oo horay ururkaasi uu u qaadacay kaqayb galka doorashada goleyaasha deegaanka ee Puntland, kaddib markii ay ku doodeen in hanaankii doorashadu u dhici lahayd ay wax badani iska bedeleen.